သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: မုန်းမိတဲ့ ဂဏန်းများ
၂, ၄, ၆, ၈, ၁၀, ၂၀, ၄၀, ၆၀, ? ? ? .........
မရယ်ရ.. ငို မရ
မဆို ရ ... ပျို မလှ
အကြောင်းဆိုးတွေ ကောင်းကျိုးတွေ ရနေတာလား၊
ဓမ္မကို အဓမ္မဖြင့် အနိုင်ယူ..
အကုန်လုံး ကန်းကုန်ကြရတော့မယ်.....။ ။
(update: မနေ.ညက ဘလော.ထဲ သွားမရလို့ မေးလ်ကနေ ပို.စ်လှမ်းတင်လိုက်တာ အဆင်မပြေလို့ နောက်ထပ် ပုံစံပြောင်းပြန်ပြင်လိုက်တာပါ...)
Posted by tg.nwai at 1:21:00 AM
ဒီတစ်ခါတော့ ရင်တွင်းဖြစ်လားမသိ။ မိုက်တယ်။
ဟတ် (heart) ထိသွားတယ်
မ ရေ… အတိတ်ဘ၀က အကြောင်းတွေက ကုန်ပဲမကုန်နိုင်ဘူးလားနော်…
မ ကို တန်ခူးရဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး အိမ်လေးတွေထဲ လင့်ခ်ထားပါတယ်…
တို့ လဲ သိင်္ဂီ့လိုပဲ အဲဒီဂဏန်းတွေကို အမုန်းကြီး မုန်းတီးပါတယ်...